Maalin: Janaayo 12, 2019
Halkan Zamli mushaaraadka
Dawlada Hoose ee Magaalada İzmir iyo Demiryol-Union Trade Union waxay kala saxiixdeen heshiis wadaxaajood oo wadajira iyaga oo gaarey is afgarad ku saabsan kordhinta 25. Duqa magaalada Izmir Aziz Kocaoglu, heshiiska ayaa lagu daabacay akoonka warbaahinta bulshada, “war wanaagsan [More ...]
Ururka Izmir Bar Association wuxuu ka falceliyay xayiraadii laga qaaday shaqo joojinta Madaxweyne Erdogan ee IZBAN. Bayaanka qoraalka ah ee ay soo saareen Ururka Isboortiga Izmir waa sidan soo socota; “Hagaajinta mushaharka iyo gunooyinka shaqaalaha İZBAN ee İzmir Laanta Ururka Shaqaalaha Tareenka, 10 Diseembar 2018 [More ...]
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay in 29 milyan oo qof ay ilaa maanta u safreen shirkadda Marmaray, oo ay maamusho shirkadda TCDD Transport Inc. Yurub oo Aasiya leh [More ...]
Fasax Jiilaal Weyn ah oo leh Baraf Express
Ma jeceshahay inaad la kulanto Orient Express, oo ka dhigaysa safarka ugu quruxda badan ee Anatolia halkii aad u tagi lahayd Uludağ jiilaal kasta? Tareenka muujinta leh ee TCDD kaas oo dhammaystiraya masaafada xNUMX kilomitir ee saxda ah 1310 saac [More ...]
Sheegga shil tareen ee Istanbul
Halkalı-Gebze khadka tareenka ee hareeraha ka dhigaya tijaabada baabuurta tareenka ee dhigaya khadka korantada, Florya ayaa isku dhacay. Shilka, dadka 3 ee dhaawacmay ayaa isbitaal looga saaray ambalaas. MUQDISHO Faahfaahin Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
Gebze- IstanbulHalkalı Shilalka Goobaha Shilalka
Sida laga soo xigtay xogta la helay, shilku wuxuu ka dhacay Bakirkoy Florya. Halkalı-Gebze khadka magaalada hareeraheeda ka dhigaya tijaabada baabuurta tareenka iyo gaariga dhigaya khadka korantada, laba gaari oo tareen ah ayaa isku dhacay madax-ilaa-madaxa Florya. Shilka koowaad [More ...]
Tababaraha taraafikada ee 21.500 Firefly oo ku yaal Denizli
Mashruuca Naafada ee Naafada Magaalada Denizli ee Magaala Xeebeedka Sanadkii hore, carruurta 21.500 ayaa la siiyay tabobar taraafikada. Denizli Turkey waa mid ka mid ah goobaha yar ee degmada ee aagga Metropolitan Traffic Waxbarashada Park of casharo af iyo qoraal [More ...]
Dowladda Hoose ee Gebze waxay dooneysaa inay xalliso dhibaatada baarkinka gawaarida iyadoo laga dhisayo xayndaabka 7 dabaq oo ku yaal bartamaha degmada. Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, Gebze 7 dabaqa gawaarida [More ...]
Maanta taariikhda: 12 January 1920 Haydarpaşa-Baghdad Railways History
Maanta taariikhda 12 January 1920 Kadib markii Ingiriisku qabsadeen xaruntii tareenka ee Haydarpasa-Baqdaad, Haydarpaşa-Konya iyo Konya-Caddaan waxay hoos u dhigeen laba maamul oo muhiim ah. Saldhigyada gaadiidka iyo saraakiisha diraya ayaa la geeyay xarumaha waaweyn.